Ny sary maneso an'i John Holcroft | Famoronana an-tserasera
Indraindray misy zavatra izay aseho tsara kokoa amin'ny alàlan'ny sary na sary noho ny amin'ny lahateny an-tsoratra mifamaly. Ireo fanoharana momba ny fitsikerana ara-tsosialy dia navoaka hatrany amin'ny media tsy miankina ary natao ho an'ny mpihaino marobe. ambanin'ny tany noho ny ady hevitra mety naterak'izy ireo. Saingy, tato ho ato dia nanjary nalaza be tamin'ny Internet izy ireo ary tsy mahagaga izany satria matetika dia miaraka amina vazivazy asidra ary indraindray fahamarinana toy ny totohondry. Ny iray amin'ireo ohatra amin'ity karazana asa ity dia ny asan'i John holcroft, mpana sary an-tsary ny fiaviany anglisy izay, hatramin'ny fahazazany, dia nahatsapa ny fitiavany hoso-doko sy ny tontolon'ny famolavolana. Hatramin'ny 2001 dia niasa tamin'ny sary an-tsary niomerika izy tamin'ny famolavolana sangan'asa feno hatsikana sy vazivazy izay nalaza be eran-tany.
Tena mahaliana ny fombany satria ny hatsaran-tarehin'ireo afisy dokambarotra tamin'ny taona 50 no anisany ary misy ny "fiatraikany ratsy" izay mameno io haja io amin'ny endrika mahazatra. Ankoatr'izay, ireo hafatra ao anatiny dia mazava be ary manondro ny olan'ny rafitray izay ianjadian'ny besinimaro. Nisy fiatraikany tamin'ny olona marobe ny asany, ka izany no nanambaran'ny Guardian na ny BBC azy hiasa amin'ny sasany amin'ny zavatra avoakan'izy ireo. Avy eo avelako miaraka amin'ny safidin'ny sanganasany ianao fa raha liana mahita ny asany feno ianao dia mila miditra aminy ihany Pejy ofisialy Behance.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary maneso an'i John Holcroft